Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Darren Lynn Bousman napetraka hitarika horonantsary mampihoron-koditra 'LaLaurie Mansion'
Manafana ny fahombiazan'ny miolakolaka, ny fidirana vao haingana indrindra amin'ny fanitarana Saw izao rehetra izao, talen'ny Darren Lynn Bousman Niakatra tamin'ny familiana ny sarimihetsika voalohany tamina franchise vaovao nomanina namboarina manodidina ny LaLaurie Mansion malaza ratsy laza. I Chad sy Carey Hayes, mpanoratra ny sarimihetsika voalohany, no nanoratra ny tetikasa The Conjuring franchise.
"Nofinofy ho ahy ny fidirana amin'ity tetikasa ity," hoy i Bousman tamin'ny fanambarana voarainay androany. “Raha mbola tadidiko dia efa variana tamin'ny paranormal aho. Izay mandalina ny mihoatra ny natiora dia mahalala ny angano sy ny lore ao amin'ny LaLaurie Mansion. Io no masira masina amin'ireo karazana tontolo iainana ireo. Vao haingana aho no navela niditra tao an-trano, ary afaka nijanona tao niaraka tamin'ireo Rahalahy mirahalahy. Tsy misy fomba ahafahana milaza ny 72 ora ao anatin'ireny rindrina ireny. Ny trano mandany anao. Manimba anao ny tantara. Ny Hayes Brothers dia namorona fitantarana mampihetsi-po, mampiahiahy ary mampatahotra toy izany, ka tsy andriko ny hampahafantatra an'izao tontolo izao an'ity toerana tsy mampino ity. ”
“Tsy Darren fotsiny no talen'ny famoronana mahavariana, fa izy koa mahay manangana franchise. Faly be izahay fa manana azy amin'ity iray ity izy, ary tsy andriko izay hijereny ny efijery, "hoy ireo Hayes mirahalahy nanampy.
Nakatona ny trano malalaka azon'ny besinimaro nanomboka ny taona 1930, saingy tsy nanakana ny mpizahatany tsy hiditra an-tranonkala isan-taona izany mba hahitana maso ny trano nipetrahan'ny vehivavy iray ratsy indrindra teo amin'ny tantara, Madame Delphine LaLaurie. amin'ny ankamaroan'ny asany mahatsiravina. Ny "fanandramana" nataony tamin'ny andevo dia hita ihany, ary nandositra ny trano izy taoriana kelin'izay.
Ny ekipa mpiasan'ny sarimihetsika dia nomen'ny tompona sy mpamokatra Michael Whalen zony manokana ny toerana mba hidirany amin'ny tantaran'ny toerana amin'ny fomba mbola tsy nanandraman'ny olona iray hafa.
iHorror dia hitazona anao halefa amin'ity LaLaurie Mansion tetikasa rehefa misy antsipiriany misimisy kokoa.
'Maty ratsy ny lalao' Manome antsika topy maso amin'ny lalao Groovy vitsivitsy amin'ny tranofiara vaovao